Soomaalida Turkiga oo halis xooggan wajahaya kadib markii lagu shaabadeeyey... - Caasimada Online
Home Warar Soomaalida Turkiga oo halis xooggan wajahaya kadib markii lagu shaabadeeyey…
Ankara (Caasimada Online) – Xaaladda dadka Soomaalida ku nool ee dalka Turkiga ayaa laga deyrinaya kadib weerar ay bishaan billowgeeda ragg burcad Turkish ah u geysteen Baashi Xoosh Jabriil oo ahaa muwaadin Soomaaliyeed, kaasi oo u geeriyooday dhaawac culus oo ka soo gaaray weerarkaas.
Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool Turkiga ayaa lagu shaabadeeyay dhaqan xumo ay bulshada Soomaalida iskugu tagaan xaafadaha qaar, gaar ahaan Kizilay, kuwaasi oo ay tabiyeen qaar kamid ah warbaahinta Turkiga, taasi oo naceyb hore leh ku abuurtay Turkish-ka.
Sheekh Abu Dalxa oo kamid ah Culimada Soomaliyeed ayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga ugu baaqay inay iska ilaaliyaan socodka aan macnaha laheyn, islamarkaana ay si aad ah isku ilaaliyaan
“Taxadar weyn oo aad u ballaaran ayaa u baahanahay, meel istaag-taaga badan aan iska ilaalino, dan hadda u baxeyso mooye gurigaaga ku eekow. Hadda wax aan faa’iideysaneyn aan guryaheena aan ku eekano, oo guryaheena aan ku barano,” ayuu yiri Sheekh Abu Dalxa.
Waxa uu intaas kusii daray in xaafada Kizilay oo Soomaalida si aad ah ugu badan tahay ay ka jirto “aragti adag oo loogu tala-galay in muwaadiniinteena looga tirtiro”.
“Taxadar dheeraad ah ayaa u baahanahay in aan ka sameyno taksiyada aan raaceyno,” ayuu yiri Sheekh Abu Dalxa oo ka shakeeyay arrin ka qabsatay Taksi uu raacay oo isku dayay in uu ka leexiyo wadadii uu u socday, taasi oo halis weyn ku noqon karta qof aan kala aqoon dalkaas.
Ugu dambeyntiina waxa uu dalbaday in safaaradda Soomaaliya ee Turkiga oo ayadu waajib ka saaran yahay dadkaas ay gudato shaqadeeda, isagoona sheegay haddii la helo dowlad adag ay fududeynayso dhibta Soomaalida ku haysata dalka Turkiga.
Arrimahan ayaa imanaya xilli dowladda Turkiga ay hore u soo saartay amar dhigaya in Ganacsatada Soomaaliyeed ka guuraan xaafada lagu magacaabo Kizilay oo ku taala badhtamaha magaaladaas, taasi oo noqotay xuddunta ganacsiyada Soomaalida ee garabka isku wada haya.
Dhibta u weyn ee wajahayaan Ganacstada Soomaaliyeed ee Turkiga ayaa ah arrimo dhowr ah, haba ugu darnaato midda dhanka sharciga ah, waxaana la xiray tiro meherado ganacsi ah, halka dadkii ka shaqaynayeyna qaarkood xabsiga loo taxaabay, kuwa kalena la masaafuriyey.